Fusel तेल किण्वन को एक byproduct भनिन्छ। तिनीहरूले कच्चा रक्सी मा एक impurity रूपमा फेला र धेरै अप्रिय विशेषता गंध छ छन्। तिनीहरूले जो रातो-खैरो गर्न हल्का पहेंलो रंग हुन सक्छ एक तेल तरल, प्रतिनिधित्व गर्छ। यो पदार्थ को मुख्य घटक अल्कोहल C3-C9 र aldehydes furfunol र फैटी एसिड छन्। Aldehydes र संतृप्त अल्कोहल भएको एमिनो एसिड खमीर metabolizing प्रक्रिया देखा। Fusel तेल जस्तै बियर जस्तै, साथै moonshine, र एकदम ठूलो परिमाणमा, वर्तमान हो।
जब यी अशुद्धताओं समस्या को एक उच्च रक्सी सामग्री संग घर पेय एकदम चर्को छ। moonshine आसवन विशेष उपकरण प्रयोग गरिन्छ। पूर्व-पीसा बियर तयारी गर्दै। यसबाहेक, यसलाई गरम छ एक उच्च तापमान। फलस्वरूप, रक्सी वाफ बाहिर खडा गर्न थाल्छन्। मा, पछिल्लो सानो पार्नु ठंडा र पहिले तयार कन्टेनर मा तल प्रवाह।
को ताप मोड पालन गर्न आसवन धेरै महत्त्वपूर्ण छ जब। प्रकाश अशुद्धताओं Braga मा निहित बारेमा 68 डिग्री को एक तापमान मा फोडा गर्न थाल्छन्। यसबाहेक, एक तापमान मा 78 ° सी, एक गहन वाष्पीकरण इथेनल को। प्रारम्भिक उत्पादन देखि 85 ° C गर्न पछि ताप मा वास्तव प्रमुख खराब fusel तेल हुन्छन्।
यो यसैले पनि ताप छिटो, को moonshine हुन्छ कि यसको काम को प्रभावकारिता मानिन्छ। अप गर्न 78 ° C तापमान मा आसवन कुन धेरै हानिकारक प्रकाश अशुद्धताओं समावेश तथाकथित pervach, प्राप्त छ। भित्र यस्तै उत्पादन लिन, साथै यो कोलोन वा लोशन मा, उदाहरणका लागि, बाह्य प्रयोगको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, वा कुनै पनि मामला मा असम्भव। को 78 ° C प्रारम्भिक उत्पादन तापमान पुगन गर्दा गर्मी को तीव्रता कम गर्न आवश्यक छ। अन्यथा इन्जेक्शन Mash उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। मा पछि ताप नै उमालेर बनाउनु जबरजस्ती उचित मुख्य प्रक्रिया हुन्छ।
यो चरण मा तिमी धेरै होसियार हुनु आवश्यक छ। पहिलो, हेरविचार पहिले नै माथि उल्लेख, यो fusel तेल देखि विनियोजन गरिनेछ अन्यथा 83 सी भन्दा उदाउँदैन लगाम कस्न तापमान रूपमा त गर्नुभयो, लिएको हुनुपर्छ। दोश्रो, यसको सामग्री बिस्तारै Braga मा घट्छ जसद्वारा यो चरण, इथेनल को वाष्पीकरण, मा।
अन्ततः, प्रारम्भिक उत्पादनमा मात्र उच्च तापमान मा हटाउन सकिँदैन भन्ने न्यूनतम रकम हुनेछ। किनभने यो fusel तेल जस्ता हानिकारक पदार्थ सामग्री वृद्धि हुनेछ तर, रक्सी खींचना गुणस्तर जोडले, घटाउनुहोस्। फलस्वरूप, 85 ° C को एक तापमान पुगन पछि आसवन रोकियो हुनुपर्छ। ईथर रक्सी वाष्प संख्या एक सरल तरिका जाँच गर्न सकिँदैन। यो गर्न, परिणाम moonshine कागज moistened र आगो मा सेट। यो एक नीलो ज्वाला रङ्ग बल्छ भने, रक्सी अझै पनि पर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध छ। कागज प्रकाश गर्दैन भने, यो रकम सानो छ भन्ने हो। यस मामला मा, प्रक्रिया मात्र Braga र redistillation संग पछि मिश्रण लागि जारी गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि, यो थप purified गर्न सकिन्छ मा समातिए तेल हटाउन परिणामस्वरूप उमालेर बनाउनु। यो अन्त गर्न, विधिहरू विभिन्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। साधारण मानिन्छ सफाई उमालेर बनाउनु पोटासियम Permanganate। यो उद्देश्य लागि यो पहिले पानी मा पतला। प्रति लीटर उमालेर बनाउनु बारेमा 1-2 ग्राम हुनुपर्छ। परिणामस्वरूप समाधान एक रक्सी खींचना मा खन्याइन् र 10-12 घण्टा खडा गर्न अनुमति दिइएको थियो। स्पष्टीकरण र वर्षा पछि, तरल को कपडे मार्फत फिल्टर छ।
Photosynthesis - यो के हो? photosynthesis को चरण। photosynthesis सर्तहरू
पोषक। मानिसहरूलाई लागि मान।
मस्तिष्क को एमआरआई: प्रक्रिया ठाउँ लिन्छ? एक मस्तिष्क एमआरआई लागि कसरी तयारी गर्ने?
साइप्रस, Protaras (Protaras), Constantinos महान् 5: * समीक्षा
मोटर लागि गर्म गाडीको अगाडीको शिशा wiper संग ब्रश
आर सी quadrocopter प्रेत: विनिर्देशों र समीक्षा
पानी वेल्स कसरी पाउन जानकारी को लागि
एक कद्दू संग Samsa: एक नुस्खा